Izenzo ze-AutoCAD zezolimo zezolimo usebenzisa i-CivilCAD kunye neSitishi seNkcitho-ii-Geofumadas
umthambo ucando usebenzisa AutoCAD kunye Total Station CivilCAD
NgoJulayi, 2013 Ukufundisa i-CAD / GIS, GPS / Izixhobo, Topography
Le yenye tutorials best Ndakhe ndabona, ingakumbi ngenxa abasebenzisi KwiCACC Ba nethemba lokwenza imizila yezobuqili ukuba i-Civil3D iza kuthatha amanyathelo amaninzi kunye nobunzima.
Olu xwebhu lwakhiwe kwaye luququzelelwe kuwebhu nguNjineli Manuel Zamarripa Medina, abaninzi baya kuxabisa ukuzimisela kwakho ukutshala ixesha kwi-manual enekhwalithi.
Ngokubanzi, uxwebhu lusekelwe kwindlela yokwenza i-12 kwimiba engaphezulu kwama-60 ngamanqaku athatyathelo ngamanyathelo; kwincandelo elungileyo yolu xwebhu i-didactics kunye nokubhala kubunobulunga obuhle. Uninzi lwemisebenzi lwenziwe ngombono womsebenzisi omtsha, kucacisa ukuba emva kwexesha umsebenzisi onolwazi ufumana amaqhinga okwenza izinto ngokukhawuleza.
Kwisigaba sokuqala, ukusebenzisa i-CivilCAD iyakhiwe kakuhle, kunye nenani elicacileyo kunye nemifanekiso. Emva koko inxalenye ichaza ukusetyenziswa kweesitishi esipheleleyo, kodwa isasebenza.
Le ngcaciso yenkcazelo:
Isahluko sokuqala sibonisa inkcazo, nangona ingenayo inombolo epheleleyo.
Izifundo zokuqala nge-CivilCAD. Kule candelo sishwankathela ubuchule kunye neenzuzo ze-CivilCAD, ezenziwa ngolu hlobo kwindlela yokwenza i -pographication eye yasasazeka eMexico. Kwakhona ichaza iinkalo ezibalulekileyo eziphathelene nokusingathwa kwesilinganiselo kunye nokuhlelwa kokushicilela; apha umqulu unempazamo yodwa, kuba kukho ilahleko ezinxulumene nebhulothi apho unokufunda khona ngaphezulu kodwa indlela yesayithi ayibonwanga.
Ukufunda ukudala ukuphakanyiswa nge-tape. Kufundiswa ukudweba amaninzi aphakanyiswe ngetayipu, ngaphandle kwesidingo sokubala usebenzisa i-triangulation, ngokukodwa imigca, imijikelezo kunye nemibambano.
Umzobo wokufunda ophando ngekhosi kunye nomgama. Nantsi indlela yokusebenzisa izixhobo ze KwiCACC ukudweba kohlolo kunye nekhampasi kunye ne-tape okanye ngekhosi kunye nomgama; kunomdla ukuba kubonisa nendlela yokwenza intlawulo ye-polygonal ngendlela yokulinganisa ubude bamacala.
Ukufunda ngokubala kunye nokudweba kwe-polygonal ngokubambisana. Kufundiswa ukusebenzisa ispredishithi kunye nomzobo ngamacandelo e-database; Kuchazwe kwakhona indlela yokuvelisa igridi yokulungelelanisa i-UTM.
Umzobo wokufunda we-profile leveling. Indlela yokudweba iphrofayili yomhlaba ukusuka ekubaleni kwinqanaba leprofayili, ukuphunyezwa kwe-.scr extension script ifakiwe.
Ukufunda ukulungiswa kwezobugcisa ngeendlela zemitha. Apha umsebenzi uqhutyelwa kwisizukulwana semigca yokujikeleza, kunye nedatha eluhlu lwamaphuzu x kunye n njengoko anikezelwa kwisikhululo esipheleleyo.
Ukuphuhliswa kokufunda kwiprojekti yendlela yokunxibelelana. Eli candelo libanzi, libandakanya kwakhona isizukulwana somzobo wedijithali, kodwa ukongezelela isebenze isakhiwo sejometri yendlela ebandakanyekayo, iingcingo eziqhelekileyo, iphrofayili yomhlaba kunye nezizukulwana zeziqendu. Yonke into yakhiwe ngeyomodyuli yeeNdlela ze-SCT, kubandakanywa ukufumana i-curve yamandla.
Izifundo zokuqala kunye neSitishi esipheleleyo. Eli candelo liyisiseko, ngokubanzi inkcazo yezona zinto zibalulekileyo kwiSitishi seSokkia Siseke i-630 RK; kwakhona ukubhekisela kwiblogi engayinikezeli indlela. Nangona le ncwadana ichaza amanyathelo, ukususela ngoku uxwebhu lulahlekelwa ibhalansi yayo kunye nemifanekiso embalwa; nangona njengokuba umbhali walo uthi, kuya kuba nophuculo olulandelayo.
Ukufunda kwi-polygonization kunye nesitishi esipheleleyo. Funda ukusebenzisa iSitishi soNyaka kwi-survey ye-polygonal; ukusuka apha kuyathakazelisa ukuba ichazwa indlela yokudlula idatha esuka kwi-PC ukuya kwisikhululo esipheleleyo.
Izifundo ezifundiweyo zokurekhoda kwedatha. Yazi isitishi esipheleleyo kunye nezixhobo zayo ukwenza uphando ngokubanzi, usebenzisa irekhodi yedatha yecomputer; ngokubanjwa kwedatha.
Izifundo zokudluliselwa kwedatha kwi-PC. Funda Sebenzisa irekhodi yekhompyutheni yeSisitishi esipheleleyo kwaye wenze ukutshintshwa kolwazi kwikhompyutheni, ukuqhubela phambili kumzobo womzobo oncedisiweyo wekhompyutha.
Izifundo ezifunyenweyo ekusebenziseni iSitishi seNkcitho kunye neNkqubo yoLwazi lweSicelo. Funda ukuqhuba iinkqubo ezifakwe kwiSitishi, ukuququzelela oku kufumana idatha yelizwe.
Umgudu omhle wombhali, obonisa ukukhula kwakhe nokukhula ekuzibopheleleni kwidemokhrasi yolwazi.
Ukusuka apha unako Khuphela umqulu.
Apha ungabona umxholo ophezulu ngombhali ofanayo.
Post edlulileyo«Edlulileyo Ngaba ndingasebenzisa imifanekiso yeGoogle Earth ye-cadastre?
Post Next I-Topographic Engineering ekuphuhlisweni kwamazwe aseMerikaOkulandelayo "
Iimpendulo ze-8 kwi "AutoCAD Exercises yokuhlola ngokusebenzisa i-CivilCAD kunye neSitishi esipheleleyo"
Eli nqaku libonisa indlela yokwenza ubuso ukusuka kwimilo ekhoyo.
UAlvaro Hernandez uthi:
Imibuliso, ndimtsha kwaye ndifuna ukufunda i-civilcad, ndibone tutorials ezininzi kwaye ndiyibona ilula ngakumbi kune-civil3d, ndinomdla, ndisebenza njenge-cartoonist kwaye ndifumana iifayile ezininzi kwi-autocad esele yenziwe kunye neeprofayili, amacandelo e-contour njl. kodwa ngaphandle kwamanqaku okanye uluhlu lweenkcukacha, ngenxa yoko andinakukwazi ukuvelisa iziphumo zam, kodwa kufuneka ndenze izibalo zamacandelo, iiprofayili okanye ubume ngokubanzi, zinokundinceda ngombono okanye ngenkqubo yokuvelisa amanqaku kumqolo. yenqanaba. Ndiyaluxabisa uncedo lwakho oluxabisekileyo, iintsikelelo
Andikhumbuli ukubona incwadi efana ne-Civil3D.
Imibuliso kwilizwe leSandino; Xa ndihamba apho ndizokwazisa ukuba une cocoa. Ndiyathemba ukuba le ngxaki inokwenzeka kungekudala.
OSCAR ALBERTO ESPINAL uthi:
I-Day Day Ing. Ngaba unayo incwadi efana nale ndiyishicilela kodwa ukuba ndifunde indlela yokusebenzisa i-CIVIL3D?
i-orlando ramon duran rumbos uthi:
Yeyona ndlela ikhosi. Undinceda njengomdlali wezolimo.
felipe izimbali iintyatyambo uthi:
ing.samarripa ndingumntu ozame ukuthatha i-autocad ne-civilcad kodwa ngenxa yesizathu esithile andikwazanga kuyenza kwaye ndaphuma ndabona inkqubo yakhe ndingathanda ukukubuza yona ukuba unokufumana iividiyo zakho ukuba zifunde ukuzoba Ukulungelelanisa ingqondo yengqondo kwi-autocad kunye ne-civilcad kwaye ukuba ndinganethuba lokusebenza noMeyi ngebheyile yokwazi ukuba ndenza umsebenzi obalaseleyo. Ukuba ungandinceda, ndingabulela kakhulu kuba uThixo ekugcwalisile ngentengiso.
UCarlos Adrian Acosta P. uthi:
Ukuze ndikwazise ukuba uzama ukukhuphela le fayile… Khuphela i-CivilCAD kunye nokuFunda kwesitishi sonke…. kwaye emva kokukhuphela xa ndiyivula, ndifumana umyalezo othi:
Ifayile ayinaku vuleka kuba akukho uhlobo lwefayile axhaswe okanye ukonakalisa (umzekelo wathunyelwa njenge-attachment kwi-e-mail kwaye decoded ngokuchanekileyo).
Kunomdla kakhulu ukuziqhelanisa nesihloko, ukuba ungandinceda ngale nto ndiyabulela, nokuba unokuphucula ifayile okanye ungandinika yona ngeposi.
NOKUBA UTHANDA UKUBA UKUNIKELWA KWENKCAZO.